Nhau - SHEHWA AKAPA SOLUTION PACKAGE YEMAHARA BEIFANG
SHEHWA, inogadzira yekuchera muchina, nenzira imwecheteyo yekupa yakakwana michina zvigadzirwa kune vatengi, inoshandisa kweanopfuura makore makumi maviri eindasitiri ruzivo kupa zvakavimbika kudhiraira mhinduro kune vashandisi ve subsurface kuchera michina uye kubatsira vatengi vatengi kuzadzisa mainjiniya zvinangwa ne yakaderera mutengo uye kugona kwakanyanya.Inonzi kubatana pakati peXuanhua kuchera rig mugadziri SHEHWA uye BEIFANG matombo hakuganhurwe pakupa michina.When BEIFANG matombo aidiwa zvinhu nekukurumidza, SHEHWA yakapawo basa rekuhaya yeX5A-DTH. BEIFANG matombo aisada kuisa mari zhinji, iyo yakachengetedza kugadzirwa kwemutengo uye yakaderedza njodzi yekuisa mukati. SHEHWA yekuchera rig inogona kunzwisisa zviri nani zvido zveBEIFANG matombo uye nekupa mhinduro dzakakosha mukusimudzira kwayo mune ramangwana.
SHEHWA iri kupa hunyanzvi hwekuchera kuBEIFANG Quarry, iri muChaoyang guta, mudunhu reLiaoning, kuti ibatsire kunatsiridza kugona kwenyunje.
Iyo tuff inowanikwa muBeIFANG matombo ndeyeye epamusoro soro jecha.Ikwari inoronga kuchera yangu angangoita mamirioni matatu emamichubic metres ematombo pano gore rega.
Tinogona kufungidzira kuti kana tikaboora gomba nekudzika kwe22m uye dhayamita ye115mm nesando, pachave neyakajeka mafungiro uye kugona kwekuchera kuchaderera.Naizvozvo, BEIFANG chemba yakatenga maseti maviri eSHEHWA X5A-DTH yakazara hydraulic submersible muchina unoburitswa naSHEHWA. Inogona kushanda ine yakanyanya-kumanikidza inonyudza inomanikidza, uye iyo yekumanikidza yekumanikidza iri kusvika 21bar.
Dombo kuomarara iri yepakati kuomarara F = 8-10. Mushure mekudzokororwa kuyedzwa mukwari, zvakatemwa kutora nzira inokombama gomba nekuvhurwa kwe140mm neAngle yemadhigirii makumi matatu kubva kudivi rekumira. Nenzira iyi, danho kudzikama rinogona kunge riri nani, mutsetse wekudzivirira unogona kuva yunifomu, uye huwandu hwakawanda uye masara anogona kuderedzwa.
X5A-DTH inogadzirwa naTaiye, anochera rig muXuanhua, anoshandiswa kuvandudza mashandiro.BEIFANG yakasarudza ichi chibooreso nekuti inogona kunyatso kudzora Angle yekuchera, kuchenesa gomba uye kutsvedza iro gomba madziro, kuboora rakadzika gomba uye kuboora nekukurumidza.
BEIFANG machira anoisa kumberi kwakakosha zvido zvekugadzira zvigadzirwa. Isu tinogara tichiti, "zvirinani kunaka kwekuumbwa kwemakomba, nani kuputika, uyezve, mugumisiro uri nani. Nemamwe mazwi, kudzikisa huwandu hwekuputika kwepiri kunogona kuwedzera kuwedzera kugadzirwa.
X5A-DTH chibooreso chiitiko chakazvimiririra chose cheiyo rig, yakashongedzerwa neye yakashandiswa mune yakakwira mweya kumanikidza DTH impacter yekuchera mota mweya compressor, ipa BEIFANG matombo ndeye 2 akazara muchina muchina, nekuti inokombamira maburi, saka inoda yakasarudzika dhizaini yerabha. chifukidziro chevhu, zvakare nekuda kwedombo rakaoma, chibooreso chinoda yakatarwa paramende Zvirongwa.
Semuenzaniso, chimiro chegeological chekwari chinoda kusarudzwa kwekukurumidza pamwe nemazino ekoramu kana musanganiswa wemazino ekoramu uye mazino echirimo. Iyo bhora iri kutenderera iri pakati pe70 ne80 kumukira paminiti, uye matombo akatsemuka asiri kuoneka pazasi pechiso panogona kukonzera maburi kutadza kuumbika, kana tambo yekuboora inonamira mugomba, kana kumanikidza kunodonha.
Panyaya yekushanda kwekugadzira, kune maburi makumi maviri nemaviri emamita, nguva yekuchera yakadzikiswa kubva paburi rimwe pa45min kusvika paavhareji yegomba rimwe pa30min.